मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै आए राष्ट्रमा थप जटिलता : डा. भिमार्जुन आचार्य-NepalKanoon.com
मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै आए राष्ट्रमा थप जटिलता : डा. भिमार्जुन आचार्य
नेपाल ल क्याम्पस मा अध्ययनरत विद्यार्थीहरुले अन्तरक्रिया कार्यक्रमको आयोजना गरेका छन । नेपालको संविधान २०७२ को मस्यौदामा मौलिक हक र न्यायपालीका सम्बन्धि व्यवस्थामा केन्द्रित रहेको उक्त कार्यक्रममा संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्यले संविधान अत्यधिक लामो रहेको र लामो संविधान भन्दा छोटो संविधान हदा जनताहरुले अधिकारको उच्चतम प्रयोग गर्न पाउछने वताए । संसारको सबैभन्दा बढि २७ पटक संविधान लेखिएको मुलुक भेनेजुयला हो भन्दैे संविधानमा थुप्रै शब्दगत तथा अन्य त्रुटीहरु रहेका संच्याउनु पर्ने उनले वताए ।
यसको परिमार्जन नगर्ने हो भने भेनेजुयला जस्तै बेलाबेलामा संविधान बनाइरहनु पर्ने अवस्था आउन सक्ने भन्न्दै संविधान निर्देशनात्म हुनुपर्दछ तर यो संविधान व्याख्यात्मक भएको वताए । संविधानको प्रश्तावनामा दुई वटा कुरा अधिकारको श्रोत र संविधानको उद्देश्य लेखिनु पर्ने मा मस्यौदामा गाली गलौज र नकरात्मक शब्दहरु रहेकोमा चिन्ता ब्याक्त गरे ।
यो मसौदा हेर्दा यो संविधान हैन विभिन्न पार्टीहरुको साझा घोषणा पत्र जस्तै भएको छ । त्यस्तै धर्म निरपेक्ष राष्ट्र भनेर लेख्ने अनि गाईलाई राष्ट्रिय जनावर भनि उल्लेख गर्दा दुईवटा धाराहरु एक आपसमा बाझिन पुग्दछन, गाई र धर्म निरपेक्षता संगै रहनै सक्दैनन उनको तर्क थियो ।
धार्मिक स्वतन्त्रता भनेर राखिसकेपछि नास्तिक हुन पाउने अधिकार भनेर राखिनु नै हुदैन । यो वाक्य पुरै हटानुपर्ने मत राख्दै खाद्य सम्प्रभुता भन्ने शब्द मौलिक हक (राज्य विरुद्धको हक) मा राखिएको छ , तर यो राज्यले अभ्यास गर्ने अधिकार हो उनले सहभागिको जिज्ञासामा उत्तर दिने क्रममा भने ।
न्यायलय सम्बन्धि पनि खासै प्रभावकारी परिवर्तनहरु गरिएको छैन । न्याधिसको नियुक्ती प्रक्रिया लगाएतका कुराहरु ०४७ सालको संविधान जस्तै हुबहु सारिएको छ । संबैधानिक अदालतको सम्बन्धमा उनी भन्छन संवैधानिक अदालत कि त स्थायी राखिनु पर्छ नत्र १० वर्षको लागि राख्नुको औचित्य छैन ।
अतः यो संविधानको समर्थनमा जत्तिको श्ँक्ति छन् त्यत्तिकै यसको विपक्षमा सडकमा उत्रेका छन् । परिमार्जन नगरि यो मस्यौदा जस्ताको त्यस्तै आए यसले राष्ट्रमा थप जटिलता ल्याउन सक्ने संकेत गरे । अन्तमा आयोजक मण्डलको तर्फबाट ओजस्वी भट्टराईले धन्यवाद ज्ञापन गरेकी थिइन् । यो कार्यक्रमको प्रतिबेदन तयार गरि सुझाव सहित संविधान सभा सचिवालयलाई बुझाउने जानकारी बसन्त जोशीले नेपालकानूनलाई दिए ।
कार्यक्रममा प्रमुख वक्ताको रुपमा कानुनका ज्ञाता तथा संविधानविद डा. भिमार्जुन आचार्य हुनुहुन्थ्यो । कार्यक्रमको आयोजना नेपाल ल क्याम्पस वि. ए. एलएल.वि. प्रथम वर्षले गरेको थियो ।